Incazelo yephupho - Ukuhunyushwa & Isichazamazwi Esisemthethweni
Kusho ukuthini ukuphupha ngezinyoka?
Kusho ukuthini ukuphupha usana?
Kusho ukuthini ukuphupha indle noma indle?
Kusho ukuthini ukuphupha usathane noma amadimoni?
Kusho ukuthini ukuphupha abathakathi nobuthakathi?
Kusho ukuthini ukuphupha ukhala?
Kusho ukuthini ukuphupha ugwazwe noma ugwaziwe?
Meaning of ukuphupha uchama
Incazelo yokuphupha amazinyo noma ukuthi amazinyo akho ayawa
Kusho ukuthini ukuphupha udutshulwa noma udutshuliwe?
Kusho ukuthini ukuphupha ubuyile ne-ex yakho?
Kusho ukuthini ukuphupha amanzi?
Kusho ukuthini ukuphupha amanzi acwebile ekhristal
Kusho ukuthini ukuphupha amanzi angcolile?
Incazelo yokuphupha ngamanzi ahlanzekile
Kusho ukuthini ukuphupha ngezicabucabu?
Kusho ukuthini ukuphupha iminyovu?
Kusho ukuthini ukuphupha ofezela noma ofezela?
Kusho ukuthini ukuphupha imikhomo?
Kusho ukuthini ukuphupha ibhayisikili?
Kusho ukuthini ukuphupha udoti?
Kusho ukuthini ukuphupha ugeza?
Kusho ukuthini ukuphupha amaphela?
Kusho ukuthini ukuphupha nge-coronavirus?
Kusho ukuthini ukuphupha izingwenya?
Kusho ukuthini ukuphupha amathuna?
Kusho ukuthini ukuphupha ushokoledi?
kusho ukuthini ukuphupha ngamazinyo?
Kusho ukuthini ukuphupha amazinyo akho ephuma?
Kusho ukuthini ukuphupha amahlengethwa?
Kusho ukuthini ukuphupha uhamba ze?
Kusho ukuthini ukuphupha ngemali?
Kusho ukuthini ukuphupha izitebhisi?
Kusho ukuthini ukuphupha ephathini?
Kusho ukuthini ukuphupha izipoki?
Kusho ukuthini ukuphupha ngempi?
Kusho ukuthini ukuphupha iziqhwaga?
Kusho ukuthini ukuphupha ngamakati?
Kusho ukuthini ukuphupha imikhaza?
Kusho ukuthini ukuphupha izinkukhu?
Kusho ukuthini ukuphupha izikelemu?
Kusho ukuthini ukuphupha usesibhedlela?
Kusho ukuthini ukuphupha izintuthwane?
Kusho ukuthini ukuphupha uzenza isilima?
Kusho ukuthini ukuphupha amaqanda?
Ngabe unentshisekelo yokwazi i- ukuhumusha futhi i incazelo yamaphupho akho? Wake wama wacabanga ngalelo phupho elibi eliziphindayo kaningi futhi elingakuvumeli ukuba uphumule? Yini ukwazi okungazami ukukudlulisela kuwe lapho ulele futhi singakwenza kanjani ukutolika okunembile kwemicabango yethu yasebusuku?
Ungahle ungazi, kepha ebusuku ubuchopho bethu busasebenza futhi bungaphupha noma ngabe belukhathele kangakanani usuku. Ngaphezu kwalokho, iphupho ngalinye esinalo lihluke ngokuphelele, cabanga nge- okushiwo amaphupho nokufunda ukutolika iziza zayo eziyinkimbinkimbi kuzokusiza ukuthi uzazi kangcono kakhulu.
Ukufundwa kwencazelo kanye ukuhunyushwa kwamaphupho kuyinto ebambe iqhaza futhi yaheha abantu kusukela ekuqaleni kwesikhathi. Ngenkathi ezikhathini zasendulo ukucaciswa kwezimpawu zamaphupho kwakufuna ukuthola umyalezo ovela kuNkulunkulu, kusukela ngekhulu lama-XNUMX nokwakhiwa kokuhlolwa kwengqondo, ukuhunyushwa kwamaphupho kusetshenziselwa ukuveza okuqukethwe okugcinwe kungazi engqondweni yomuntu noma ukukhathazeka kosuku. usicindezele phakathi kwabanye.
Njengamanje sibonga izazi ze-psychoanalysts ezidumile njengodumile Sigmund Freud, owaseFrance uJean Laplanche noJean-Bertrand Pontalis noma abaseSwitzerland UCarl Gustav Jung ukutolika kwephupho kuyekile ukubonwa njengento engeyona ebucayi futhi sekuyindlela yokwelashwa. Uma unentshisekelo esihlokweni, lapha unesixhumanisi sencwadi yami yokubhekisela kanye nabalobi engibathandayo.
1 Thola okushiwo amaphupho mahhala kusichazamazwi sethu esikhethekile
2 Isichazamazwi esisemthethweni sephupho: ukutolikwa ngeke kusaba yimfihlakalo kuwe
3 Yenza ukutolika kwephupho bese uthola ukuthi kusho ukuthini
4 Ukuhunyushwa vs incazelo yamaphupho
5 Ukuhunyushwa kwamaphupho endulo
6 Kuyini ukuphupha?
7 I-Psychoanalysis kanye nencazelo kaFreud
8 I-psychology yokuhlaziya kaCarl Jung
9 Isichazamazwi sokuhumusha incazelo yamaphupho
11 Ziyini izigaba zokulala
11.1 Isigaba I: isigaba sokuba ndikindiki
11.2 Isigaba II: isigaba sokulala esincane
11.3 Isigaba III: isigaba soguquko
11.4 Isigaba IV: isigaba sokulala okujulile
11.5 Isigaba sokulala se-REM
12 Amaphupho ajwayelekile kakhulu
13 Iseluleko sokukhumbula iphupho kahle
14 Izincazelo zamaphupho
Thola okushiwo amaphupho mahhala kusichazamazwi sethu esikhethekile
Emigqeni elandelayo ungathola uhlu lwe izincazelo zephupho ezivela ku-AZ, ukwenza kube lula kuwe ukusebenzisa iwebhu. Wonke la maphupho ayingxube phakathi kokuhlanganiswa kwamaphupho abaluleke kakhulu aphathwe ngababhali abahlonishwa kakhulu kanye neminye yeminikelo yami uqobo ngokususelwa kokuhlangenwe nakho kwami ​​ngamaphupho engihlupheke futhi engiwahlaziye ngawacwaninga ngokuningiliziwe iminyaka.
Uhlu oluphelele kepha luyaqhubeka ekuziphendukeleni okuqhubekayo, Uma unephupho elikukhathazayo futhi eliziphindaphindayo futhi akuveli ohlwini engikuncenga kulo ngibhalele umyalezo ngokusebenzisa isigaba soxhumana naye sewebhu futhi ngizophenya icala lakho bese ngifaka lelo phupho ohlwini ukuze nabanye abasebenzisi bazi ngalo.
Isikhathi sesifikile sokuthola iphupho elikukhathazayo. Lapha unohlu oluhlelwe ngokulandelana kwama-alfabhethi.
Amaphupho aqala ngo-A
Kusho ukuthini ukuphupha ibhokisi lomngcwabo?
Kusho ukuthini ukuphupha imoto, imoto noma imoto?
Kusho ukuthini ukuphupha ukubulala noma ukubulala?
Kusho ukuthini ukuphupha ngabangani?
Kusho ukuthini ukuphupha izingelosi?
Kusho ukuthini ukuphupha izinyosi?
Kusho ukuthini ukuphupha izinaliti?
Kusho ukuthini ukuphupha ngendiza?
Amaphupho aqala ngo-B
Phupha ngezindlu zangasese ezingcolile
Kusho ukuthini ukuphupha ama-slugs?
Kusho ukuthini ukuphupha izikhova nezikhova?
Kusho ukuthini ukuphupha kuqhuma isibhamu?
Kusho ukuthini ukuphupha izinambuzane nezimbungulu?
Kusho ukuthini ukuphupha udansa?
Amaphupho aqala ngo-C
Kusho ukuthini ukuphupha izinyoka?
Kusho ukuthini ukuphupha ummese?
Kusho ukuthini ukuphupha ungena esikhaleni?
Kusho ukuthini ukuphupha izinkalankala?
Kusho ukuthini ukuphupha amagwababa echobana?
Amaphupho aqala ngo-D
Kusho ukuthini ukuphupha ulwa noma uxabana?
Amaphupho aqala ngo-E
Kusho ukuthini ukuphupha isoka lakho langaphambili noma intombi yakho yakudala?
Kusho ukuthini ukuphupha izindlovu?
Kusho ukuthini ukuphupha ukhulelwe?
Amaphupho aqala ngo-F
Kusho ukuthini ukuphupha u-Facebook?
Kusho ukuthini ukuphupha ngomlilo?
Kusho ukuthini ukuphupha izithelo?
Kusho ukuthini ukuphupha izimbali?
Kusho ukuthini ukuphupha izihlobo ezingasekho
Amaphupho aqala ngo-G
Amaphupho aqala ngo-H
Amaphupho aqala ngami
Kusho ukuthini ukuphupha uzamcolo?
Kusho ukuthini ukuphupha ngesonto?
Kusho ukuthini ukuphupha ngokungathembeki noma ukukhohliswa?
Amaphupho aqala ngo-L
Kusho ukuthini ukuphupha ngezikelemu?
Kusho ukuthini ukuphupha amabhubesi?
Kusho ukuthini ukuphupha izimpisi?
Kusho ukuthini ukuphupha izibankwa?
Kusho ukuthini ukuphupha imvula?
Kusho ukuthini ukuphupha i-labyrinth?
Kusho ukuthini ukuphupha okhiye?
Amaphupho aqala ngo-M
Kusho ukuthini ukuphupha ubulawa?
Kusho ukuthini ukuphupha ubulala?
Kusho ukuthini ukuphupha izinkawu?
Kusho ukuthini ukuphupha amapotimende?
Kusho ukuthini ukuphupha izimpukane?
Kusho ukuthini ukuphupha ngokufa?
Kusho ukuthini ukuphupha umuntu efile?
Kusho ukuthini ukuphupha izinhlamvu zemali nezikweletu?
Amaphupho aqala ngo-N
Kusho ukuthini ukuphupha izinombolo?
Kusho ukuthini ukuphupha ubhukuda?
Kusho ukuthini ukuphupha izingane?
Kusho ukuthini ukuphupha iqhwa?
Amaphupho aqala ngo-O
Kusho ukuthini ukuphupha igolide?
Kusho ukuthini ukuphupha ngamagagasi amakhulu?
Kusho ukuthini ukuphupha u-ouija?
Amaphupho aqala ngo-P
Kusho ukuthini ukuphupha ubhadane lwezifo?
Kusho ukuthini ukuphupha izintwala?
Kusho ukuthini ukuphupha echibini lokubhukuda?
Kusho ukuthini ukuphupha inhlanzi noma inhlanzi?
Ukuphupha ukuthi uyajahwa noma uyajahwa
Kusho ukuthini ukuphupha ngamaphoyisa?
Kusho ukuthini ukuphupha amajuba?
Kusho ukuthini ukuphupha isinkwa?
Amaphupho aqala ngo-R
Kusho ukuthini ukuphupha amagundane?
Kusho ukuthini ukuphupha ngezingubo?
Kusho ukuthini ukuphupha amaselesele namaxoxo?
Kusho ukuthini ukuphupha iwashi?
Kusho ukuthini ukuphupha umfula?
Amaphupho aqala ngo-S
Kusho ukuthini ukuphupha igazi?
Kusho ukuthini ukuphupha uthumba?
Kusho ukuthini ukuphupha amaZombi?
Amaphupho aqala ngo-T
Kusho ukuthini ukuphupha oshaka?
Kusho ukuthini ukuphupha izinkunzi?
Kusho ukuthini ukuphupha nge-tsunami?
Kusho ukuthini ukuphupha ukuzamazama komhlaba noma ukuzamazama komhlaba?
Kusho ukuthini ukuphupha izingwe?
Kusho ukuthini ukuphupha ama-tarantula?
Kusho ukuthini ukuphupha izimfudu?
Kusho ukuthini ukuphupha umhlaba?
Kusho ukuthini ukuphupha iziphepho neziphepho?
Amaphupho aqala ngo-V
Kusho ukuthini ukuphupha ngokuhamba noma ukuvakasha?
Kusho ukuthini ukuphupha ngezinkomo?
Kusho ukuthini ukuphupha ngentaba-mlilo?
Kusho ukuthini ukuphupha uhamba ngezindiza noma u-levitation?
Kusho ukuthini ukuphupha ingubo yomshado?
Kusho ukuthini ukuphupha uhlanza?
Kusho ukuthini ukuphupha ngezimvubu?
Uma sesilele, sihamba nohambo oluhle lokuveza izifiso zethu nokwesaba. Amahora okuphumula aba ukuhambela ezinkingeni zosuku nosuku, kulezo zinto ezikhathazayo ezihlasela izingqondo zethu, ngakho-ke kubalulekile ukuqonda ukuhunyushwa kwamaphupho ukucacisa incazelo yalo.
Isichazamazwi esisemthethweni sephupho: ukutolikwa ngeke kusaba yimfihlakalo kuwe
Ezikhathini zasendulo, amasiko azama ukuthola ukuthi lingachazwa kanjani iphupho ngalinye, amanye avela ngendlela engaqondakali ne-esoteric, kepha amanye alandela indlela yesayensi. Okusho ukuthi, njengakwezinye izimpucuko, kwakukhona abakhohlisi nodokotela bezengqondo abahlonishwa kakhulu.
Konke okwenzeka kokungazi lutho kwethu lapho siphupha kungasiza ekuxazululeni ukungabaza okuningi esingeke sikwazi ukukuqonda ngesikhathi sokuvuka. Mhlawumbe lesi yisizathu esenza ukuthi abantu bachithe amakhulu eminyaka bephishekela izincazelo zabo ku yazi konke ngengqondo nobuntu bakho.
Yenza ukutolika kwephupho bese uthola ukuthi kusho ukuthini
Ngabe sinamaphupho angaphambili? Kungani zimelela izifiso zethu nokwesaba kwethu? Kungani ukungazi kahle kwengqondo kudala imicabango engaqondakali? Kwesinye isikhathi singamangala yinkimbinkimbi yephupho. Siphupha ukuthi siphelelwa ngumsebenzi, kufe ilungu lomndeni noma sihlukane nozakwethu. Okungukuthi, kunjalo amaphupho ahlobene nemvelo yethu, futhi kwesinye isikhathi zibonakala zingokoqobo kangangokuba sibheka incazelo kumlayezo wamaphupho osithumela wona. Uma ufuna ukuthola ungakwenza kanjani ukutolika okulungile kwamaphupho akho chofoza lapha.
Ukuhunyushwa vs incazelo yamaphupho
Ukwazi incazelo yephupho akufani nokulihumusha. Ukwazi ukutolika ngokunembile akukho phupho, akudingeki wazi kuphela incazelo yalo, kepha futhi kuyadingeka ukwazi eminye imininingwane ebalulekile umongo lapho zenzeka khona, ngoba incazelo efanayo yephupho ingaba nokuhumusha okuhluke kakhulu kubantu abahlukahlukene ngoba izothonya lokho okushiwo yile ncazelo ngokwendlela oyiyo, umndeni wakho, indawo okuyo, isimo sakho sothando, impilo yakho noma isimo sakho sezimali. Isibonelo, akufani phupha igolide uma ucebile kunokuba ungumpofu. Ekugcineni iphupho liyafana, kepha ukutolika kuhluke kakhulu.
Ukuhunyushwa kwamaphupho endulo
AmaGreki ayesevele enesithakazelo kulesi sihloko. Kepha emuva lapho, uhlelo lwakhe lokuzama ukutolika amaphupho lwalulawulwa yisiko lomlomo. Lokho wukuthi, yonke leyo mibono eyadluliselwa isuka kwesinye isizukulwane iye kwesinye futhi ingxenye enkulu, kwakuyi- intando yonkulunkulu okubonwe kulawo maphupho.
Kepha ngakolunye uhlangothi lwale nkolelo, ababhali bathanda i- isazi sefilosofi uPlato noma u-Aristotle Baphinde babhala imibono yabo ngalolu daba ezincwadini ezinjengeRiphabhlikhi yokuqala neyama-About Dreams owesibili. Ngaphandle kokukhohlwa lokho, ngokuhamba kwesikhathi, uPythagoras naye wakhuluma ngalolu daba njengendlela yokuxhumana yezidalwa ezingaphezu kwemvelo. Ngenkathi amaStoyiki ebheja ngokunikezwa. Kamuva kwakuzofika imibono emisha kaCicero noma u-Artemidoro.
Ukuzama ukuqagela ukuthi kwenzekani ngakithi, nangamaphupho, kubizwa ngokuthi ukuphupha. Kepha amaphupho kuphela, ngoba lapho kwakukhona amaphupho amabi ahilelekile, kwathiwa uSathane wawaqalisa futhi ayengakufanele ukuhlaziywa. Kuyiqiniso ukuthi ngaphandle kwayo yonke imibono ekhona, lokhu inqubo yokubhula, kusekelwe ezifundweni zikaSigmund Freud.
I-Psychoanalysis kanye nencazelo kaFreud
Eminye yemibono noma izifundo ezizoza noFreud bese zivele zinesisekelo sazo kulokho esisanda kukusho. Lokho kusho ukuthi, bebengeke babe yinoveli, ngoba isiko lalikhona kakhulu kubo. Kepha, yize kuyigama elinzima ukulihlaziya, kufanele kuthiwe uFreud weza ukubeka iphuzu walandela. Bengifuna ukukukhombisa lokho izimpawu ezivezwe ephusheniZazihlobene nengqondo yethu nokuquleka.
Ngalesi sizathu, lapho sihlaziya iphupho, kufanele sithathe yonke imiqondo nemibono esiyibona kulo hhayi ukuhlala neyodwa nje. Futhi akunakwengezwa amasu okukholelwa ezeni noma ukutolika kohlobo oluyela ngasocansini. Izixhumanisi nobudlelwano nempilo yethu yansuku zonke nakho kuzobaluleka kakhulu. Kuwo wonke amaphupho, uFreud unikeze igama elithi 'amaphupho ajwayelekile' kulabo abaphindelela kakhulu kithi. Isibonelo lezo ezihlobene nokufa noma ukuwa. Njengoba bonke kungaletha ukungezwani kwangaphakathi. Ngamafuphi, wathi amaphupho ayindlela eya ngaphakathi kwethu nasezifisweni zethu ezicashile kakhulu.
I-psychology yokuhlaziya kaCarl Jung
Uma sifunde uFreud, kuyiqiniso ukuthi nathi ngeke simkhohlwe uJung. Wabuye futhi wamxaka ngemibono yowokuqala, kepha udokotela wezifo zengqondo waseSwitzerland waqhubekela phambili. Ngokubanzi, amaphupho akhe ayewumkhiqizo wemvelo. Nsuku zonke wayebona ezigulini zakhe izinkinga zokukhohlisa kanye nemibono engekho futhi la maphupho wokuhlanganisa ayeneziqubu ezivamile kwabanye izindaba ezinganekwane.
Ngakho-ke lapho wabona ukuthi bekungekho ngaso sonke isikhathi ubudlelwane obuqondile nalokho umuntu ayehlala noma azizwa khona. Yingakho akubiza ngokuhlanganyela okungazi lutho. Konke lokhu kuzoba uhlobo lwezimpawu zokuziphatha abantu abazizuza njengefa futhi ezingachazwa njengama-archetypes noma imizwa ethile yemvelo. Ngakho-ke ngamafuphi, lokho uJung ayefuna ukukusho yilokho amaphupho anencazelo kokuhlangenwe nakho kwethu futhi babezoba yibhuloho lezidingo zomphefumulo.
Isichazamazwi sokuhumusha incazelo yamaphupho
Yize ingxenye enhle yamaphupho ilawulwa ukuzithoba, kunezinto eziningi ezinencazelo echazwe kahle. Uphenyo olunzulu lwalezi zinto lusebenze ukuqoqa yonke idatha ku-a isichazamazwi samaphupho, incwadi umuntu angahumusha ngayo eyakhe.
Uma unesithakazelo ku- thola ukuthi asho ukuthini amaphupho, qonda ukuthi bameleni nezimpawu zabo, ngesichazamazwi sethu samaphupho ungangena lonke ulwazi mahhala ngokuphelele. Uzozazi kangcono ngemiyalezo yomqondo wakho ongazi lutho futhi uzokwazi ukuthi ukutolika kanjani ukukhathazeka kwakho kweqiniso. Vuliwe izincazelo-suenos.com uzokwazi ukufinyelela emazingeni ajulile okuzazisa komuntu siqu kanye nokwenza ngcono ngokomoya ngokufuna incazelo yawo.
Igama lami nginguNacho Zarzosa futhi yimina umuntu owenza le webhusayithi. Ngineziqu ze-psychology ezivela ku- I-Faculty of Psychology yaseYunivesithi yase-Oviedo futhi unentshisekelo enkulu ngencazelo yamaphupho kanye ne-psychoanalysis. Ungabona lonke ulwazi ngami ngokuchofoza lapha.
Ziyini izigaba zokulala
Ukwazi isigaba ngasinye sokulala kungasisiza kakhulu ukuba silale kamnandi kakhulu futhi siphumule kangcono. Lokhu kuyinto ethonya kakhulu kulokho esikuphuphayo, ngakho-ke ukwazi izigaba kahle kubalulekile.
Isigaba I: isigaba sokuba ndikindiki
Kuyisigaba sokuqala futhi kufaka phakathi i- Imizuzu eyi-10 yokuqala yokulala, kusukela lapho sisesikhathini sokuvuka size sozele kancane.
Isigaba II: isigaba sokulala esincane
Isigaba sesibili sokulala sine- ubude besikhathi cishe sesigamu sesikhathi sokulala futhi kuyisigaba lapho umzimba wakho unqamuka kancane kancane emvelweni ngasikhathi sinye ukushaya kwenhliziyo nokuphefumula kuhamba kancane kuba nokuzola nokuphumula ngokwengeziwe. Kulesi sigaba kunzima kakhulu ukuthi siphaphame, kepha ngaphandle kwalokho ezigabeni zethu zobuchopho zomsebenzi omkhulu wobuchopho ziyashintshana nezinye ezincane kakhulu. Imvamisa lapho siphaphama kulesi sigaba sivamise ukukwenza ngendlela ethukile, ngokwesibonelo lapho siphupha ukuthi siyakhubeka noma siwe eweni.
Isigaba III: isigaba soguquko
Isigaba sesithathu sifushane kunaso sonke, sithatha cishe imizuzu emi-2 noma emi-3 isiyonke futhi siyi- inguquko phakathi kokulala okulula nesigaba sokulala okujulile.
Isigaba IV: isigaba sokulala okujulile
Isigaba sokulala okujulile sithatha u-20% wobuthongo obuphelele futhi sibaluleke kakhulu kunakho konke ngoba sinquma ikhwalithi yokuphumula namandla omzimba okululama ekukhathaleni kosuku. Izinga lokuphefumula liphansi kakhulu futhi umfutho wenhliziyo wehla kakhulu, ngakho-ke kunzima kakhulu ngathi ukuthi siphaphame ngokwemvelo kulesi sigaba.
Isigaba sokulala se-REM
Isigaba sokulala se-REM sithatha ukulala kwethu okungama-25%. Igama elithi REM livela kuRapid Eye Movement ngesiNgisi futhi kusho ukuthi amehlo ahlala ehamba ngaphansi kwamajwabu amehlo. Umsebenzi wobuchopho phakathi nalesi sigaba uphakeme kakhulu, ucishe ube sezingeni elifanayo nalapho siphapheme kodwa ngasikhathi sinye imisipha yethu ivinjiwe ukusivimbela ekuphenduleni kulo lonke ulwazi olusetshenzwa ubuchopho bethu. Ngalesi sigaba ukulala kwenzeka ngakho-ke yisigaba esibaluleke kunazo zonke okufanele usicabangele kule webhusayithi.
Amaphupho ajwayelekile kakhulu
Akuwona wonke amaphupho ajwayelekile ngokufanayo, kunamaphupho abantu abaningi abahluphekayo, ngokwesibonelo ukuphupha nge ex yakho noma ngisho uphuphe ubuyele ku-ex wakho futhi, ukuphupha ngamanzi, phupha ngendle, iphupho lokundiza, ukuphupha ngezibhamu o iphupho lokuwela esikhaleni. Ngenkathi ezinye ziyivelakancane njenge ukuphupha ngamaphoyisa. Yiba nephupho elijwayeleke kakhudlwana noma eliqinisayo ayikwazi ukuhunyushwa njengokuhle noma okungekuhle. Ngokufanayo, iphupho elixakile kumuntu oyedwa lingase livame kakhulu komunye. Kufana, ngokwesibonelo, ukuphupha ngamaphoyisa kuvame kakhulu uma umsebenzi wakho uhlobene namaphoyisa, njengokuthi usebenza ebhange noma esibhedlela.
Iseluleko sokukhumbula iphupho kahle
Ngabe ufuna ukuyikhumbula kahle yonke imininingwane yephupho ukuze kamuva uthole incazelo yalo? ’Ngincoma ukuthi ufake i- iphepha nepeni lokubhala konke lokho okukhumbulayo ephusheni lakho ngokushesha nje lapho uvuka. Khumbula ukuthi noma imiphi imininingwane iyabalwa, njengoba kungasho okuningi lapho uyihumusha kahle. Kamuva, lapho uqeda usuku lwakho, faka isichazamazwi sethu futhi ufunde izimpawu zento ngayinye ukuze uyiqonde kangcono.
Ngale ndlela, uzothola hhayi kuphela i- amaphupho nencazelo yawo, kepha ungafunda Kusho ukuthini ukuphupha izintwala noma i incazelo yokuphupha ngamaphelakanye ne ukutolika nencazelo yokuphupha ngemali bese uthola izimfihlo ezigcinwe ekujuleni kwengqondo yakho. Kusukela manje, awusenaso isizathu sokuhlaziya okushiwo amaphupho futhi uzazi kangcono kangcono njalo ebusuku.
Ungalihumusha kanjani iphupho
© 2022 | meanings-suenos.com: isichazamazwi esisemthethweni samaphupho nokuhumusha | NguNacho Zarzosa